को हुन् पिताको विरासत धान्ने शेख हसिना ? – Lokpati.com
अमेरिका नेपाल प्रहरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री राशिफल अपराध मृत्यु चितवन केपी शर्मा ओली पक्राउ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा सरकार नेपाली काँग्रेस पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड
को हुन् पिताको विरासत धान्ने शेख हसिना ?
By लाेकपाटी न्यूज Last updated Dec 30, 2018
एजेन्सी । शेख हसिना बंगलादेशको वर्तमान प्रधानमन्त्री हुन् । उनको जन्म २८ सेप्टेम्बर १९४७ मा भएको थियो । उनी बंगलादेशको नवौं राष्ट्रिय संसद्को सरकारी पक्षको प्रधान तथा बंगलादेश अवामी लिगकी नेत्री हुन् । उनी बंगलादेशलाई महान् स्वाधीनता संग्रामको प्रमुख नेता तथा बंगलादेश सरकारका प्रथम राष्ट्रपति जनक बंगबन्धु शेख मुजीबुर्रहमानकी छोरी हुन् ।
उनको पिता, माता र तीन भाई सन् १९७५ को एक सैन्य कारबाहीमा मारिएका थिए । उक्त कारबाहीपछि पनि उनले राजनीतिक सफलता सजिलैसँग हात पारिनन् । उनले ८० को दशकमा बंगलादेशमा जनरल इरशादको सैनिक शासनविरुद्ध आवाज उठाइन् । जसकारण उनी धेरैपटक जेलसमेत जानुपर्‍यो । जनरल इरशादपछि उनले जनरलकी पत्नी बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टीकी खालिदा जियासँग कडा टक्कर गरिन् । लामो समयसम्म लडिरहिन् ।
सन् १९९६ मा शेख हसिनाले चुनाव जितिन् र लामो समयसम्म देशमा शासन चलाइन् । त्यसपछि उनले विपक्षीमा पनि आफूलाई उभ्याउनुपर्‍यो । उनीमाथि एकपटक ज्यान लिने हमला पनि भयो । त्यसमा उनी बाँचे पनि अन्य बीस जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । एकपटक उनी ठूलो राजनीतिक संकटमा फसिन् । देशको बागडोर सेना समर्थित सरकारले सम्हाल्यो ।
उक्त सरकारले शेख हसिनामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगायो र उनको धेरैजसो समय जेलमै बित्यो । यसैबीचमा उनी उपचारका लागि भन्दै अमेरिका पनि गइन् । केहीले जेलबाट बच्न उपचारको बहानामा अमेरिका भासिएको समेत भने । कतिपयले उनी बंगलादेश फिर्ता हुँदिनन् भन्दै आशंका व्यक्त गरेका थिए । तर, उनी फर्किइन् । दुई वर्षको सैनिक शासनसमेत सात वर्षपछि उनले सन् २००८ मा भएको संसदीय चुनावमा विजय हासिल गरिन् ।
त्यसपछि उनले बंगलादेशको शासन सत्ता चलाइरहेकी छन् । बंगलादेशमा भोलि अर्थात् आइतबार आमनिर्वाचन हुँदैछ । जहाँ शेखलाई बलियो अवस्थामा लिइएको छ ।
ताराको देशमा हराएको नागरिकता खोजिरहेछु
वायुसेनाको विमानले यात्रुवाहक विमानलाई आकाशमै घेरा हालेपछि…
कक्षा २ सम्मका बच्चालाई होमवर्क दिन नपाइने !
घोडा चढेर पेक्टु हिमाल किन पुगे उत्तर कोरियाली नेता किम ?